Feed & စားနပ်ရိက္ခာအပိုဆောင်း
Allyl ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine
1,56 Photochromic Optical ဗဓေလသစ် Monomer
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride Anhydrous (Prill)
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride Dihydrate (Prill)
မဂ္ဂနီစီယမ်ကလိုရိုက် (Common အလွှာ)
ဓာတုအမည်: မဂ္ဂနီစီယမ်ကလိုရိုက်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Luyuan Tech မှ CAS NO: 7786-30-3; 14989-29-8 ဓာတုဖော်မြူလာ: MgCl2 ဓာတု Strusture: မော်လီကျူးအလေးချိန်: 95,21 လျှောက်လွှာ: 1.Metallurgical နယ်ပယ်: ဆန့်ကျင်ဘက်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုထားတဲ့ကော် ပစ္စည်းများနှင့်ပန်းရံလက်နက်နှင့် flux နှစ်ခုနှင့်ရောစပ်မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုအောင်များအတွက်ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 2.Chemical စက်မှုလုပ်ငန်း: အဓိကအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော Magne အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောမဂ္ဂနီဆီယမ်ဆား, များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြု ...
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် : Luyuan Tech
ဓာတုဖော်မြူလာ : MgCl 2
မော်လီကျူးအလေးချိန် : 95.21
1.Metallurgical နယ်ပယ်: ဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းများနှင့်ပန်းရံလက်နက်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုထားတဲ့ကော်နှင့် flux နှစ်ခုနှင့်ရောစပ်မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုအောင်များအတွက်ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။
2.Chemical စက်မှုလုပ်ငန်း: အဓိကအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမဂ္ဂနီစီယမ်အောက်ဆိုဒ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောမဂ္ဂနီဆီယမ်ဆား၏ထုတ်လုပ်ခြင်း, မဂ္ဂနီဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်, firecrackers, အစိုင်အခဲအေးဂျင့်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
3.Machinery စက်မှုလုပ်ငန်း: နေ့စဉ်ဘဝ, magnesite စက်မှုထုပ်ပိုးနှင့်ဖွဲ့နိုင်ပါသည်, တြိဂံခေါငျးအုံးနဲ့ပရိဘောဂ, မြေဆီလွှာပစ္စည်းကောင်းတစ်ဦးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆားရည်အိုင် (မဂ္ဂနီဆီယမ်ကလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်) tofu လုပ်ထားတဲ့ကျောက်ကိုအမှတ်ကိုကျော် tofu အောင်, အရည်အသွေးနူးညံ့အရသာနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းအစားအသောက်အတွက်အပိုအဖြစ်အသုံးပြု: 4.Food စက်မှုလုပ်ငန်း။
5.Traffic စက်မှုလုပ်ငန်း: လမ်း deicing နှင့်ဆီးနှင်းအရည်ပျော်အေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြု, ရေခဲ၏လျင်မြန်အမြန်နှုန်း, မော်တော်ယာဉ်များမှလျော့နည်းတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး, ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုထက်ပိုမိုမြင့်မား။
6. ဆေးပညာ: မဂ္ဂနီဆီယမ်ကလိုရိုက်, စိုက်ပျိုးရေးကနေဖန်ဆင်းတော်: မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
White ကမဂ္ဂနီစီယမ် Chloride
အဖြူရောင်အလွှာ / granules
အဝါရောင်အလွှာ / granules
MgCl ၏အကြောင်းအရာ2.
MgCl 2· 6H 2အို (%)
grade နျ Standard:
စက်မှုအဆင့် / အဆင့် / အစားအသောက်အဆင့် Feed
ဆာလဖိတ်အကြောင်းအရာ (SO 42- ) (%)
(CI- အတွက်) အယ်လကာလီသတ္တုကလိုရိုက် (%)
ဖော့စဖိတ် (PO4) (%)
ထုပ်ပိုး: 25kg စက္ကူ / PP / PE ယက်အိတ်, 1000kg ဂျမ်ဘိုအိတ်, 1000kg အိတ်သို့ 25kg အိတ်
ယခင်: မဂ္ဂနီစီယမ်ကလိုရိုက် (Prill)
နောက်တစ်ခု: မဂ္ဂနီစီယမ်ကလိုရိုက် (Common အလွှာ)
4 စားနပ်ရိက္ခာအဆင့် Anhydrous ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride
8 94% အောင်မင်းကယ်လ်ဆီယမ် Chloride - ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride Powder
94% အောင်မင်းကယ်လ်ဆီယမ် Chloride
Anhydrous ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride 74%
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride 77% အလွှာ
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride 94%
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride 95%
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride ရေဓါတ်ခန်းခြောက်
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride Powder 94%
ရောင်းရန်ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride Powder
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride Powder စျေး
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride Prills / အလွှာ Powder
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride Prp Active
ကယ်လ်ဆီယမ် silicates Powder
Hou မြို့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပန်းခြံ, Shouguang စီးတီး, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
ICIF တရုတ် 2015
တရုတ်သွင်းကုန် & ပို့ကုန်တရားမျှတသော Complex, ...
ရှန်ဟိုင်းနယူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲစင်တာကို C ...